ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာ သင်လှူလိုက်တဲ့ အုန်းပွဲ၊ငှက်ပျောပွဲတွေက ဒီလိုနေရာတွေကို ရောက်ကုန်ပါတယ် ⋆ The Ginger Media
ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာ သင်လှူလိုက်တဲ့ အုန်းပွဲ၊ငှက်ပျောပွဲတွေက ဒီလိုနေရာတွေကို ရောက်ကုန်ပါတယ်
TheGingerMedia · Posted on May 20, 2019
ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ အုန်းသီးနဲ့ ငှက်ပျောဖီးတွေအများကြီး ဆွမ်းတော်တင်ကြပါတယ်။ ဘုရားပေါ်က ဝန်ထမ်းတွေဟာ အဲဒီငှက်ပျောသီးစိမ်းတွေနဲ့ အုန်းသီးတွေကို တစ်ရက် နှစ်ကြိမ် စွန့်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို စွန့်လိုက်တဲ့ ငှက်ပျောသီးတွေက ဘယ်ရောက်သွားတာပါသလဲ?
လူအချို့ ထင်နေကြသလို လွှင့်ပစ်လိုက်တာလည်း မဟုတ်သလို၊ ရောင်းစားလိုက်တာလည်း မဟုတ်ရပါဘူး။ အသီးတွေကို စွန့်ပြီးတဲ့အခါ ဝန်ထမ်းတွေဟာ သိုလှောင်ရုံတွေဆီကို ယူသွားကျပါတယ်။
သိုလှောင်ရုံမှာ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားပြီးတော့ တစ်ပိုင်းမှာ ငှက်ပျော်သီးတွေထားပြီး တစ်ပိုင်းမှာ အုန်းသီးတွေ ထည့်ထားပါတယ်။
ဘုရားပေါ်က တာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောစကားအရ အဲဒီငှက်ပျောသီးနဲ့ အုန်းသီးတွေဟာ ရန်ကုန်တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နဲ့ ဓမ္မရက္ခိတ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဆီကို ရောက်သွားတာပါ။
ရန်ကုန်တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်က အလုပ်သမားတွေဟာ အင်္ဂါနေ့နဲ့သောကြာနေ့တိုင်း ငှက်ပျောသီးစိမ်း အဖီး ၃၀၀ ကနေ ၆၀၀ အထိ လာယူကြပါတယ်။ဓမ္မရက္ခိတ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကလည်း ငှက်ပျောသီးနဲ့ အုန်းသီးအချို့ကို လာယူကြပါတယ်။
ကျန်တာကိုတော့ တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်က အကုန်ယူသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငှက်ပျောသီး၊ အုန်းသီးတွေက မျောက်တွေ၊ ဝက်ဝံတွေ၊ ကိုရင်လေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးတွေဆီ ရောက်သွားတာပါ။
လှူတဲ့ ငှက်ပျောသီး အမျိုးအစားကတော့ အမျိုးမျိုးပေါ့။ “တချို့စိမ်းနေသေးတဲ့ အသီးတွေဆိုရင်တော့ သိုလှောင်ထားပြီးမှည့်တဲ့အခါမှ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို ကျွေးရပါတယ်” လို့ရန်ကုန်တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ရဲ့ မန်နေဂျာကပြောပါတယ်။
ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာ ရှိတဲ့ လောကပါလမယ်တော်၊ ဘိုးဘိုးကြီးနတ်နန်း၊ ဘိုးမင်းခေါင်ဓတ်နန်း၊ ရှင်စောပုစေတီ တွေမှာ ယုံကြည်သူတွေဟာ ကံကောင်းစေဖို့အတွက် အုန်းပွဲ ငှက်ပျောပွဲတင်ပြီး ဆုတောင်းကြပါတယ်။
“အဲဒီ နတ်စင်တွေကနေ အသီးတွေတစ်ခါစွန့်တိုင်း လှည်းအပြည့်နဲ့အသီးတွေကို နှစ်ကျော့လောက် သယ်ရတယ်” လို့ တာဝန်ရှိသူက ပြောပါတယ်။ဘာသာရေးပွဲနေ့ ပွဲရက်တွေရှိတဲ့အခါဆိုရင် လှည်းအစီးရေအများကြီးနဲ့ကို သယ်ယူခဲ့ရပါတယ်။
“ဘုရားပေါ်က အသီးတွေကို လိုအပ်တဲ့သူ ဘယ်သူကိုမဆို ပေးပါတယ်။ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကြိုတင်ပြီး လာပြောထားရပါမယ်” လို့ ရွှေတိဂုံဘုရား အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့် လိုအပ်တဲ့သူတွေ ရှိရင်လည်း လက်ဆင့်ကမ်း ဝေမျှပေးလိုက်ကြပါဦး။
ရှတေိဂုံဘုရားမှာ တဈနတေ့ဈနေ့ အုနျးသီးနဲ့ ငှကျပြောဖီးတှအေမြားကွီး ဆှမျးတျောတငျကွပါတယျ။ ဘုရားပျေါက ဝနျထမျးတှဟော အဲဒီငှကျပြောသီးစိမျးတှနေဲ့ အုနျးသီးတှကေို တဈရကျ နှဈကွိမျ စှနျ့လရှေိ့ပါတယျ။ အဲဒီလို စှနျ့လိုကျတဲ့ ငှကျပြောသီးတှကေ ဘယျရောကျသှားတာပါသလဲ?
လူအခြို့ ထငျနကွေသလို လှငျ့ပဈလိုကျတာလညျး မဟုတျသလို၊ ရောငျးစားလိုကျတာလညျး မဟုတျရပါဘူး။ အသီးတှကေို စှနျ့ပွီးတဲ့အခါ ဝနျထမျးတှဟော သိုလှောငျရုံတှဆေီကို ယူသှားကပြါတယျ။
သိုလှောငျရုံမှာ အပိုငျးနှဈပိုငျးခှဲထားပွီးတော့ တဈပိုငျးမှာ ငှကျပြျောသီးတှထေားပွီး တဈပိုငျးမှာ အုနျးသီးတှေ ထညျ့ထားပါတယျ။ဘုရားပျေါက တာဝနျရှိသူရဲ့ပွောစကားအရ အဲဒီငှကျပြောသီးနဲ့ အုနျးသီးတှဟော ရနျကုနျတိရိစ်ဆာနျဥယြာဉျနဲ့ ဓမ်မရက်ခိတ ဘုနျးကွီးကြောငျးတှဆေီကို ရောကျသှားတာပါ။
ရနျကုနျတိရိစ်ဆာနျဥယြာဉျက အလုပျသမားတှဟော အင်ျဂါနနေဲ့သောကွာနတေို့ငျး ငှကျပြောသီးစိမျး အဖီး ၃၀၀ ကနေ ၆၀၀ အထိ လာယူကွပါတယျ။ဓမ်မရက်ခိတ ဘုနျးကွီးကြောငျးတှကေလညျး ငှကျပြောသီးနဲ့ အုနျးသီးအခြို့ကို လာယူကွပါတယျ။
ကနျြတာကိုတော့ တိရိစ်ဆာနျဥယြာဉျက အကုနျယူသှားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ငှကျပြောသီး၊ အုနျးသီးတှကေ မြောကျတှေ၊ ဝကျဝံတှေ၊ ကိုရငျလေးတှနေဲ့ဘုနျးကွီးကြောငျးသားလေးတှဆေီ ရောကျသှားတာပါ။
လှူတဲ့ ငှကျပြောသီး အမြိုးအစားကတော့ အမြိုးမြိုးပေါ့။ “တခြို့စိမျးနသေေးတဲ့ အသီးတှဆေိုရငျတော့ သိုလှောငျထားပွီးမှညျ့တဲ့အခါမှ တိရိစ်ဆာနျလေးတှကေို ကြှေးရပါတယျ” လို့ရနျကုနျတိရိစ်ဆာနျဥယြာဉျရဲ့ မနျနဂြောကပွောပါတယျ။
ရှတေိဂုံဘုရားပျေါမှာ ရှိတဲ့ လောကပါလမယျတျော၊ ဘိုးဘိုးကွီးနတျနနျး၊ ဘိုးမငျးခေါငျဓတျနနျး၊ ရှငျစောပုစတေီ တှမှော ယုံကွညျသူတှဟော ကံကောငျးစဖေို့အတှကျ အုနျးပှဲ ငှကျပြောပှဲတငျပွီး ဆုတောငျးကွပါတယျ။
“အဲဒီ နတျစငျတှကေနေ အသီးတှတေဈခါစှနျ့တိုငျး လှညျးအပွညျ့နဲ့အသီးတှကေို နှဈကြော့လောကျ သယျရတယျ” လို့ တာဝနျရှိသူက ပွောပါတယျ။ဘာသာရေးပှဲနေ့ ပှဲရကျတှရှေိတဲ့အခါဆိုရငျ လှညျးအစီးရအေမြားကွီးနဲ့ကို သယျယူခဲ့ရပါတယျ။
“ဘုရားပျေါက အသီးတှကေို လိုအပျတဲ့သူ ဘယျသူကိုမဆို ပေးပါတယျ။ လိုခငျြတယျဆိုရငျတော့ ကွိုတငျပွီး လာပွောထားရပါမယျ” လို့ ရှတေိဂုံဘုရား အလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့က ပွောပါတယျ။ဒါကွောငျ့ လိုအပျတဲ့သူတှေ ရှိရငျလညျး လကျဆငျ့ကမျး ဝမြှေပေးလိုကျကွပါဦး။